Music သံတွေကြား မြူးတူးကခုန်နေတဲ့ DJ Soda ရဲ့ ချစ်စရာ ဗီဒီယိုဖိုင်လေးများကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်…. - Zeekwat Hot News
August 10, 20190360
ပုရိသတွေကြားမှာ အရမ်းကို နာမည်ကြီးတဲ့ အမျိုးသမီး DJ တစ်ယောက်ရှိပါတယ်။DJ ဆိုတာနဲ့ ပုရိသ တော်တော် များများ ပြေးမြင်မိကြတဲ့ သူလေးကတော့ DJ Soda ပါ။သူမရဲ့ Cute နဲ့ Sexy ပေါင်းထားတဲ့ အလှ၊တက်ကြွ လန်းဆန်းတဲ့ ပုံစံနဲ့ သူမရဲ့ အမိုက်စား DJ လက်ရာသံလေးတွေကြောင့် နာမည်ကြီးနေတာပါ။
오늘은 가로수길 뷰직에서 1시에 모여모엿!!🐣🐥🐤💛 #Nolimit X #allthewayup
A post shared by Dj Soda Official 🇰🇷 (@deejaysoda) on Aug 9, 2019 at 3:32am PDT
DJ Soda ကိုတော့ (၁ ၉၈၈)ခုနှစ်မှာ တောင်ကိုရီးယား၊ဆိုးလ်မြို့မှာ မွေးဖွားခဲ့တာပါ။သူမရဲ့ ပြင်ပရုပ်ရည်ကြောင့် တော်တော် များများက သူမကို (၂၀) ကျော်လောက်လို့ သာ ထင်ရပေမယ့် တကယ်တော့ သူမရဲ့ အသက်က (၃၀) ကျော်ပါပြီ။
#캠프통포레스트 풀파티가 요새 그렇게 핫하다고 해서 내가 노래트는걸 빙자하고 놀다왔지💦 BGM🎵@kryoman X #DJSODA X @1stklaseravers <Holding Back remix(Feat. @kyedevere)> ( @thelostchameleon Remix)
A post shared by Dj Soda Official 🇰🇷 (@deejaysoda) on Aug 4, 2019 at 8:18am PDT
DJ Soda ဟာ ဆိုးလ်၊တိုကျို၊ လန်ဒန်နဲ့နယူးယော့ခ်၊ဘန်ကောက်၊ကွာလာလမ်ပူ၊စင်ကာပူ အစရှိတဲ့ နိုင်ငံတွေ အပြင် ပြည်ပနိုင်ငံတော်တော်များများရဲ့ Music ပွဲတွေ မှာ ပါဝင် ဖျော်ဖြေပေးနေသူတစ်ယောက်ပါ။မြန်မာနိုင်ငံကိုလည်း လာ ရောက်ခဲ့ဖူးပါတယ်။နာမည်အရင်းကတော့ Hwang So Hee ပါ။
디제이소다 이번 주 스케줄~💖 8월 2일 금요일-옥타곤 힙존 2:00am 8월 3일 토요일-가평 캠프통 포레스트 11:00pm 8월 4일 일요일-러셀 웨스트브룩 서울투어 Nike event (#RussellWestbrook #whynottour )- 신촌 연세로 차없는거리 4:00pm
A post shared by Dj Soda Official 🇰🇷 (@deejaysoda) on Aug 1, 2019 at 5:07am PDT
DJ Soda ကတော့ အမေရိကန် ဖလော်ရီဒါမှာ ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ 2017 MLB All-Star Week Festivities မှာ ပါဝင် ရင်းနဲ့ နာမည်ကြီးလာခဲ့သူပါ။ သူမက အဲ့ဒီပွဲမှာတော့ ကိုရီးယားနိုင်ငံ ကိုယ်စားပြု အဖြစ်နဲ့ ပါဝင် ပေးခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ ပြည်ပ Music ပွဲတွေ တိုင်းမှာ သူမကို တွေ့လာရတာပါ။DJ Soda ဟာ Great Britain ရဲ့ နာမည်ကြီး BBC Radio show မှာ ပါဝင် ဖျော်ဖြေခွင့်ရတဲ့ ပထမဆုံး ကိုရီးယား အနုပညာရှင်ပါ။
လူလေးတင်မကပဲ စိတ်ထားလေးပါ လှတဲ့ သူမဟာ (၂၀၁၆) တုန်းက အမျိုးသမီးတွေ ရာသီလာရင် သုံးတဲ့ Tampon ပစ္စည်းတွေ ၀ယ်ဖို့ မတတ်နိုင်တဲ့ မိန်း ကလေးတွေ ကို ကူညီပေးတဲ့ ဖျော်ဖြေပွဲတစ်ခုကို သူမရဲ့ ရသမျှ ၀င်ငွေ တွေ အကုန်လုံး လှူဒါန်း ပေးခဲ့ ဖူးပါတယ်။
ပုရိသတှကှေားမှာ အရမြးကို နာမညကြှီးတဲ့ အမွိုးသမီး DJ တစယြောကရြှိပါတယြ။DJ ဆိုတာနဲ့ ပုရိသ တောတြော မွားမွား ပှေးမှငမြိကှတဲ့ သူလေးကတော့ DJ Soda ပါ။သူမရဲ့ Cute နဲ့ Sexy ပေါငြးထားတဲ့ အလှ၊တကကြှ လနြးဆနြးတဲ့ ပုံစံနဲ့ သူမရဲ့ အမိုကစြား DJ လကရြာသံလေးတှကှေောငြ့ နာမညကြှီးနတောပါ။
DJ Soda ကိုတော့ (၁ ၉၈၈)ခုနှစမြှာ တောငကြိုရီးယား၊ဆိုးလမြှို့မှာ မှေးဖှားခဲ့တာပါ။သူမရဲ့ ပှငပြရုပရြညကြှောငြ့ တောတြော မွားမွားက သူမကို (၂၀) ကွောလြောကလြို့ သာ ထငရြပမယြေ့ တကယတြော့ သူမရဲ့ အသကကြ (၃၀) ကွောပြါပှီ။
DJ Soda ဟာ ဆိုးလြ၊တိုကွို၊ လနဒြနနြဲ့နယူးယော့ခြ၊ဘနကြောကြ၊ကှာလာလမပြူ၊စငကြာပူ အစရှိတဲ့ နိုငငြံတှေ အပှငြ ပှညပြနိုငငြံတောတြောမြွားမွားရဲ့ Music ပှဲတှေ မှာ ပါဝငြ ဖွောဖြှပေေးနသေူတစယြောကပြါ။မှနမြာနိုငငြံကိုလညြး လာ ရောကခြဲ့ဖူးပါတယြ။နာမညအြရငြးကတော့ Hwang So Hee ပါ။
DJ Soda ကတော့ အမရေိကနြ ဖလောရြီဒါမှာ ကငြွးပပှုလုပတြဲ့ 2017 MLB All-Star Week Festivities မှာ ပါဝငြ ရငြးနဲ့ နာမညကြှီးလာခဲ့သူပါ။ သူမက အဲ့ဒီပှဲမှာတော့ ကိုရီးယားနိုငငြံ ကိုယစြားပှု အဖှစနြဲ့ ပါဝငြ ပေးခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီနောကပြိုငြးမှာတော့ ပှညပြ Music ပှဲတှေ တိုငြးမှာ သူမကို တှလေ့ာရတာပါ။DJ Soda ဟာ Great Britain ရဲ့ နာမညကြှီး BBC Radio show မှာ ပါဝငြ ဖွောဖြှခှငြေ့ရတဲ့ ပထမဆုံး ကိုရီးယား အနုပညာရှငပြါ။
လူလေးတငမြကပဲ စိတထြားလေးပါ လှတဲ့ သူမဟာ (၂၀၁၆) တုနြးက အမွိုးသမီးတှေ ရာသီလာရငြ သုံးတဲ့ Tampon ပဈစညြးတှေ ဝယဖြို့ မတတနြိုငတြဲ့ မိနြး ကလေးတှေ ကို ကူညီပေးတဲ့ ဖွောဖြှပှေဲတစခြုကို သူမရဲ့ ရသမွှ ဝငငြှေ တှေ အကုနလြုံး လှူဒါနြး ပေးခဲ့ ဖူးပါတယြ။
သိပ်လှတဲ့ dress လေးနဲ့ မြင်သူတိုင်း မှင်သက်အောင် လှပနေခဲ့တဲ့ အူဝဲ